Washington State gbara Apple akwụkwọ ikpe maka 'Apple' na 'Macintosh' | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 28, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu.
Ma ọ bụ… Ndị ọrụ ubi Indiana Pea gbara Apple akwụkwọ maka iji 'Pod'.
Ma ọ bụ… Arthur C. Clarke gbara Apple akwụkwọ maka iji 'Pod'. Cheta, “Na-emechi ụzọ Pod, Hal.”
Ma ọ bụ… Rock band, The Breeders, gbara Apple akwụkwọ maka iji okwu a bụ 'Pod'. Aha otu n'ime ọba ha.
More na Pods na Wikipedia.
Na-egwu egwu m, Apple? Ndị ahịa gị niile na-eji ehihie na abalị na-anwa ime ka okwu aha gị dị na lingo anyị kwa ụbọchị ma ugbu a ọ dị ebe ahụ, ị ​​chọrọ ịkpụ ya? Ị na-egwusa m egwu? Enwere m olileanya ma kpee ekpere maka ụbọchị otu n'ime okwu m ga-apụ na ngwaahịa m mepụtara ma na-ere ahịa.
Mara na ị nwere ọtụtụ ndị ọka iwu mgbe…
ị na-agba akwụkwọ ụlọ ọrụ maka ịnakwere mgbasa ozi ahịa gị nke ọma!
Nke a bụ ihe nzuzu dịka Google na-agba Ggling. Ego ole ka ị na-eji okwu ọnụ na-akpọsa ebe ndị mmadụ na-eji okwu ahụ eme ihe? Ugbu a ị chọrọ karịa? Ọ kwụọlarị ụgwọ maka onwe ya! Ndị mmadụ anaghịdị ekwu “Chọọ na Web” ọzọ… ọ bụ “Ndi Google na?”.
You ma na ọ bụrụ n ’Google… er… mee nchọta weebụ maka Macintosh Apple, ụlọ ọrụ apụl anaghị abịa? Echere m na oge eruola ka Washington State gbaa Apple akwụkwọ maka mmebi a na-apụghị ịgbanwe agbanwe ọ na-eme ụlọ ọrụ apụl n'ihi na ọ nweghị onye nwere ike ịchọta apụl Macintosh na ntanetị.
Na-arụ ọrụ ozugbo, echere m na anyị niile kwesịrị ime ihe kwekọrọ n'uche Apple ma gbanwee oge ahụ iji sonye na ya Zune. Site ugbu a gaa n'ihu, a ga-akpọ Podcasting "Zuning"!
Akụkọ zuru ezu na ụlọ Apple maka 'Pod'
Sep 28, 2006 na 9: 20 AM
Orâ ¦ Indiana Pea Farmers na-ekpekariri Apple maka iji "Pod".
Orâ? ¦ Arthur C. Clarke gbara Apple akwụkwọ maka iji "Pod". Cheta, "?? Imechi Pod Pods, Hal."
Ma ọ bụ Rock Rock, The Breeders, gbara Apple akwụkwọ n'ihi iji okwu a eme ihe - "Podâ". Aha otu n'ime ọba ha.
Echere m, hey, ezu na Mac bashing! Ah ee, ọbụna I enweghị ike ịgbaghara Apple maka ihe ha na-eme ugbu a. Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ike ga-aga n'isi ha n'oge na-adịghị anya.
Sep 30, 2006 na 9:46 PM
Chineke gbara Apple akwụkwọ maka iji “I” - ndo, enweghị ike iguzogide ya.